Zvinyorwa zvaJoe Andrews pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Joe Andrews
Joe Andrews ndiye VP weChigadzirwa uye Solution Kushambadzira pa MukatiVona uye anga achityaira mari semutengesi wekushambadzira ane hukuru hwekukura, makambani ezve tekinoroji anovhiringidza kwemakore makumi maviri nemana. KuInsideView, Joe anotungamira pasi rose kuenda-kumusika nzira, kumisikidza uye kuvhura zvigadzirwa zvitsva uye zvikamu zvemusika. Pakutanga Joe aibata zvinzvimbo zvekutungamira kuZuora, VMware, Intuit uye iMarket Inc. (kambani yeD&B). Unogona kutevera Joe on Twitter uye LinkedIn.
4 Matanho Ekurodza Yako kuenda-kuMusika Kutarisisa muna 2019
China, April 4, 2019 China, April 4, 2019 Joe Andrews
Sezvo isu tichikwikwidza kune rakabudirira 2019, imwe nhaurwa iri pamusoro wepfungwa kune vazhinji B2B yekutengesa uye yekushambadzira vatungamiriri vandakataura navo ndiyo yavo yekuenda-kumusika zano. Chinovira kune vazhinji vatungamiriri ndechekuti kambani yavo iri kunanga zvikamu zvakanaka zvemusika uye kuti vakagadzirira sei kuita zano ravo. Nei izvi zvichikosha? Kuve neakasimba kuenda-kumusika musika kwakabatana kwazvo kune kuita kwemari. Mune ongororo yedu yekupedzisira makumi mashanu
MukatiVona Mafuta Anopa Go-ku-Musika Kubudirira ne Targeting Intelligence
Chitatu, Nyamavhuvhu 2, 2017 Chipiri, August 1, 2017 Joe Andrews
Kudzvinyirira maCMOs kuri kukurumidza kuwedzera sezvo ivo vachipihwa rakanangana mutoro wekuwedzera kwemari, kusanganisira yakawanda bhajeti uye masisitimu zviwanikwa kuti zviitike. "Zvakanaka," iwe unoti! Pakupedzisira kumwe kuremekedza kwevatengesi. Asi dambudziko nderekuti vava kubatwa vachizvidavirira pakuunza zviyero zvinoyerwa - uye nekukurumidza. Chipingamupinyi chikuru pakubudirira zvikwata zvekushambadzira zvinoshaya masimba akakosha anodiwa kuyera kukanganisa kwadzo kukura kwesangano (semuenzaniso ruzivo rwekutyaira